Vatosoa: Halaza koa ve ny orika (scandale) bolongam-batosoa 383kg hafa indray?
2008-10-11 @ 10:46 in Toekarena
Raha nanana ny lazany ka nandraisan'ny fitondram-panjakana fanapahan-kevitra ny hampitsaharana hatreo ny fanondranana vato, indrindra ny vatosoa dia tsy mampihena velively ny fandraharahana amin'ity sehatra ity izany. Mody nampandriana adrisa ny rehetra tamin'ny lahatsoratra an-gazety fa manomboka miala amin'ity sehatra ity izay zatra izany teo aloha satria tsy afa-manondrana intsony nefa tsy nisy kelimaso nody tany amin'ny taniny velively teo.Toa vao maika aza miroborobo ny varotra.
Raha eo amin'ny resaka vatosoa manko dia eto 67ha indray no karazana Ilakaka (tsy mbola nahita ilakaka mivantana aho) vaovao eo amin'ny fandraharahana. Ny any Ilakaka resaka safira fotsiny fa ny eto kosa rehefa vatosoa mandeha daholo. Mahavariana fa kelimaso daholo ireto mpividy vato eto amin'ny tanàna ireto. Mampieritreritra hoe sao dia ity indray ary no fifanarahana miafina teo amin'ny Malagasy sy ny Shinoa amin'ny fananganana ireo Hotely ny trano ho an'ny filoham-panjakana hivory eto Madagasikara amin'ny herintaona? Ahiahy io fa tsy hoe ny marina tsy akory fa zarako aza diso hevitra aho ny amin'izay.
Eto amin'ny manodidina ahy manko raha misy elanelana mifanalavitra indrindra amin'ireto mpividy vato ireto dia 100 metatra ihany. Mety ho azo eritreretina ihany ny hoe mifaninana izy ireto raha hividy nefa mahita tsara aho fa dia mifampiresaka sy mifampitsiditsidika izy rehetra; mety hoe mifampitsilo nefa manahy aho fa toa iray ihany ny lehiben'izy rehetra.
Manaraka izany, mahita tsara aho fa tena be tokoa ny mivezivezy mivarotra izay hitany ny Malagasy mitondra ny entany any amin'ireny Kelimaso ireny ka raha tombanana efa tokony ho hipoka tanteraka ny tranon-dry zalahy mpividy ireto nefa dia toa mahita toerana ametrahana ny entana tonga hatrany ry zalahy. Mazava loatra fa misy ny foiben-toerana andefasany izay entana azony. Tsy anjarako, sady tsy manam-potoana amin'izany aho, ny mijery ny lalana alehany rehefa miala eto 67ha fa ny mahalasa saina ahy dia hoe tsy mba tsikaritry ny minisiteran'ny harena an-kibon'ny tany mihitsy ve fa eto daholo no ivantanan'ny entana entin'ny malagasy ho an'ny Shinoa ary hatreto indray ny entana no miainga ho amin'ny sehatra avoavo kokoa? Raha tiana ny hifehezana ity sehatra ity, moa tsy eto ve no arahi-maso voalohany, afa-tsy hoe efa nisy ho'aho ny fifanarahana teo amin'ny fitondram-panjakana malagasy sy shinoa?
Hamaranana: ahoana moa ny anton'ny lohateny? Androany sabotsy dia ilaharana indray ny mitondra vato na aiza io na aiza amin'ireo kelimaso mpividy vato ireo. Izay no ahitana taratra fa mijery andro ny ankamaroany raha tsy izy rehetra, omaly anefa dia mipetrapetraka sy miresadresaka niaraka avokoa ireo mpividy vato ireo. Fa ilay vatobe iray nanalana tanteraka vavahady vy hampidirana azy izay no tsy matiko lolo. Ngeza izany raha vato! dimy lahy ry zalahy no manakorisa azy amin'ny kodiarana fa mila tsy hahakisaka. Hita ho nolokoina maitso ilay ato nefa tena madio dia madio ahiako ho vato lafovidy hafa ilay izy afa-tsy hoe vato efa namboarina (izany hoe efa maty hasina indray). Tsy azo heverina anefa izany satria mailo dia mailo ireto Shinoa ireto rehefa hividy. Matoa novidiany dia fantany ny lanjany sy ny sandany. Tsy mety fay mihitsy aho izany mitantara nefa mety ho ny aina mihitsy no manefa raha mbola be tantara eo! Sa izay tokoa ilay hoe maharesaka?